Fihoaram-pefy :: Polisy telo mamo sady namoa-doza teny Ivandry • AoRaha
Fihoaram-pefy Polisy telo mamo sady namoa-doza teny Ivandry
Fanolanana, fakàna an-keriny, famotsorana olona tokony ho naiditra am-ponja: ireo no heloka fandikan-dalàna nanagadrana vonjimaika polisy miisa dimy, izay Kaomisera ny iray, tato anatin’ ny andro vitsy. Vao tamin’ny zoma teo dia polisy telo hafa indray no naiditra an-tranomaizina sy hampiakarina Filankevi-pitsipi-pifehezana noho izy ireo mamo am-perinasa sady nanimba zavatr’olona.
“Tsy misy intsony ny indrafo fa na iza na iza dia handraisana fepetra. Ao anatin’ny fanadiovana anatiny tanteraka izahay izao”, hoy ny Contrôleur Général Rafanomezantsoa Roger, minisitry ny Filaminam- bahoaka, omaly.
Fampiatoana amin’ny asa
Manenjana ireo tompon’ andraikitra ambony ao amin’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka miandraikitra ny Polisim-pirenena. Ny tranga farany tamin’ny zoma dia polisy telo lahy manao fanamiana miasa ao amin’ny Kaomisarian’ny Boriborintany fahavalo, ao Analamahitsy no mamo an-dalambe ary nitondra fiara ka nahadona fiaran’olona, teny Ivandry.
Tezitra mafy noho io zava-nisy io ny Kaomisera Divizionera, Rakotozanany Danny Marius, tale jeneralin’ ny Polisim-pirenena ka avy hatrany dia nandray fepetra teo no ho eo. Naiditra an-tranomaizina ireo polisy telo lahy ary naato vonjimaika amin’ny asany. Hampandalovina Filankevi-pitsipi-pifehezana, izay mety hiafara amin’ny fandroahana azy ireo ihany koa izany. Ankoatra ireo dia nasaina niantoka ny simba rehetra vokatry ny loza nataony ireo polisy.
Momba ireo polisy dimy hafa, izay naiditra am-ponja vonjimaika indray, dia tamin’ ny fiandohan’ity volana ity ilay Kaomisera lehiben’ny kaomisaria any Maevatanàna no naiditra am-ponja tany Mahajanga. Voarohirohy tamin’ny fakàna an-keriny nisesisesy io tompon’ andraikitra io.
Polisy iray hafa ihany koa no migadra any Fianarantsoa voampanga ho nanolana vehivavy, tamin’ny faran’ny volana avrily teo. Farany, vao tamin’ny 6 mey teo dia polisy telo nirahina hanatitra olona haiditra am-ponja vonjimaika no namoahan’ny Fampanoavana didy famonjana. Antony, teny an-dalana hanatitra ilay olona any am-ponja izy ireo no tafatsoaka io olona io. Ahiana ho namotsotra ilay voampanga izy telo
mianadahy polisy ireto.
Fiparitahan’ny fitaovampiadina :: Tra-tehaka ireo basy mahery vaika efatra amby telopolo
Loza teny Andralanitra :: Vehivavy iray maty voahitsaky ny kamiao mpanary fako